Uphononongo lweThebhulethi yaBantwana ngo-2022-Isikhokelo esiGqibeleleyo
Uphononongo lwethebhulethi yabantwana
Blackview Tab 6 Abantwana
Izipho zabantwana abaselula
Isipho somntwana oneminyaka eyi-1 ubudala
Uphononongo lweThebhulethi yaBantwana-IThebhulethi eNgcono yaBantwana ngo-2022
Ukhangela umntu othembekileyo Uvavanyo lwethebhulethi yabantwana ngemethodi ecacileyo? Si iipilisi zabantwana ezingcono kakhulu ngo-2022 zivavanyiwe.
Iitafile ezivela kwiAmazon
Iimodeli ezigqwesileyo zika-2022
Abantwana abahleli bovavanyo lwethebhulethi
Ihlaziywe nge-29 ka-Epreli 2022
Ukhangela umntu othembekileyo Uvavanyo lwethebhulethi yabantwana ngemethodi ecacileyo? Si iipilisi zabantwana ezingcono kakhulu ngo-2022 zivavanyiwe. Ukuthenga ithebhulethi yabantwana kutyalomali olukhulu. Sineemodeli zangoku kwixabiso-ukusebenza kunye Ubuhlobo bomntwana buvavanyiwe. Ngoku funda kwaye uzikhusele ngemali echithiweyo ezona mpawu zintle kuwe nomntwana wakho. Cofa apha ngoku ukufunda uphononongo lwethu lweetafile ezahlukeneyo kwaye ufumanise ukuba yeyiphi enokulungela umntwana wakho.
Uvavanyo lwenqanaba lokuphumelela kunye nesishwankathelo
Xa zithengwa zintsha, iipilisi zabantwana kufuneka zibe neempawu ezininzi kangangoko kodwa zilawuleke kubazali
Uluhlu lokukhangela iipilisi zabantwana
Iziphumo zovavanyo lwethebhulethi yabantwana ngokweenkcukacha
1. Blackview Tab 6 Ithebhulethi yabantwana yabantwana
Ayinakutshintsha: Iminyaka emithathu ukuya kwesibhozo
Ulawulo lwabazali: Indawo ye-iKids yolawulo lwabazali, isikhenkcezisi sosetyenziso, ukhuseleko lwegama eliyimfihlo, ulawulo lwexesha, ulawulo lwesicelo, ulawulo losetyenziso, ulawulo lwewebhusayithi
Iiakhawunti ezininzi zabantwana: Ewe
iwaranti: Iminyaka emi-2 (Ngokutsho komenzi: Xa kukho isiphene, inokubuyiselwa kumenzi kwaye ithebhulethi yokutshintsha iya kuhanjiswa)
impilo: Itekhnoloji yokuKhanya okuBlue ephantsi, iMowudi emnyama, iCase ayinayo inetyhefu kwaye ayinavumba
Umthamo wokugcina: 32GB ( 256GB inokwandiswa)
camera: ngasemva, ngaphambili
Isisombululo sekhamera: 2MP + 5MP
Imilinganiselo yemveliso X x 20.8 12.4 0.9 cm
amabhetri ‎1 iibhetri ze-lithium-ion ezifunekayo (zibandakanyiwe).
imibala: Blue / Pinki
Ubungakanani bokubonisa I-8 intshi, 1280*800 inkcazo ephezulu ye-IPS yesikrini sokuchukumisa
Inkqubo: 2,0 GHz (12 nm quad-core Unisoc-T310)
Inkqubo yenkqubo: 8
imemori yokufikelela ngokungacwangciswangaIxabiso: 3GB RAM
Uhlobo loQhagamshelwano: 5G WIFI, 4G LE, Bluetooth
inkqubo yokwenza I-Android 11 kunye neDoke OS_P 2.0
Ubomi bebhetri: 9.9 watt iiyure
Ubunzima bento Iigram ezingama-365
Amanqaku ethu 9.6
Ab 169,9 149,99 yeEUR
Ngowona mnikelo ungcono
Unxibelelwano: Izibuko le-USBC, i-MicroSD slot, i-3,5mm i-headphone jack
ISIM: IiSIM ezimbini (2*Nano SIM okanye 1*Nano SIM + 1*microSD)
Specials: Imowudi yokuzonwabisa yesikrini esiphindwe kabini, i-4G LTE ephindwe kabini: inokusebenzisa amakhadi amabini efowuni ngexesha elinye, ukuvulwa kwe-ID yoBuso, ikhesi yesikhumba
Inkqubo yokusebenza: Fire OS
Ubungakanani bomboniso: 10,1 ngaphakathi
Isisombululo sesikrini: 1080ppixels
I-32 GB yememori
Imibala: Icala kwisibhakabhaka esiluhlaza, i-aquamarine okanye i-lavender
Ikhamera yangaphambili nasemva
Ulawulo lwabazali Izihlungi zobudala, iinjongo zokufunda kunye nemida yexesha
ukulungiswa kweminyaka: emva kokufaka umhla wokuzalwa
Google Play Store inokwenzeka
imo yokonga amandla
I-3 GB RAM
Ubomi bebhetri: Ukuya kwiiyure ze-12
Amanqaku ethu 9.65
Inkqubo yokwenza: Android 10
Ubungakanani bomboniso: 8 ngaphakathi
Isisombululo sesikrini: 1920 x 1200 Pixel
8 intshi HD ukubonisa
Ukugcina: I-32GB (eyandiswa ukuya kwi-128GB)
kumqhubekekisiIxabiso: 2GB RAM
Imibala: Imibala emibini; blue and pink
Playstore: Google Play Store kunokwenzeka
yokhuseleko: AEEZO Mahala Ulawulo lwabazali App: Qhagamshelana nabantwana kwaye ujonge imisebenzi yamva nje + frequency kunye nobude bokusebenzisa
Ubomi bebhetri: 9.25 iiyure
Ubukhulu: 21 x 12.5 x 1 cm; Iigrama ezingama-350
camera: iikhamera ezimbini (2MP + 5MP).
iwaranti: Ukubuya konyaka omnye kunye nenkonzo yokutshintshiselana.
4. Umlilo 8 HD Tablet Kids Edition
Inkqubo yokwenza: I-OS yomlilo
Iminyaka eyi-2 iwaranti: Isixhobo siza kutshintshwa simahla
0% yenkxaso-mali: €45,00 x 3 izavenge zenyanga
8 intshi HD ukubonisa imifanekiso ebukhali kunye neevidiyo
Ama-Amazon abantwana +: ithala leencwadi leendaba elingenantengiso
I-WiFi iyahambelana: I-intanethi engenamkhawulo
32 GB inkumbulo nge microSD slot: ixhomekeke ku 1 TB iyandiswa
Imibala: Ifumaneka ngemibala emithathu
Ukumisela ixesha lokusetyenziswa kwabantwana kunokwenzeka
Amanqaku ethu 9.2
Ulawulo lwabazali: inkqubo yokukhusela igama eliyimfihlo, ukusetwa kwexesha lesikrini, iindlela zokhuseleko kunye nolawulo lomxholo wokubrawuza.
impilo: Itekhnoloji yokukhanya okuBlue okuphantsi
Umthamo wokugcina: 32 GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-128 GB)
imemori yokufikelela ngokungacwangciswangaIxabiso: 2GB RAM
Imilinganiselo yemveliso X x 21 12.4 1 cm
imibala: Blue, Pinki
Bonisa: 8 intshi, 1920x1200 pixels
Inkqubo: 1,6 GHz quad core iprosesa
Inkqubo yenkqubo: ‎4
Uhlobo loQhagamshelwano: I-Wi-Fi
inkqubo yokwenza I-Android 9.0 - 10 (iinkcukacha ziyahluka)
accumulator: 5000mAh lithium polymer ibhetri
Ubomi bebhetri: ‎4.9 watt iiyure
Ubunzima bento yona: 863g
Unxibelelwano: USB Type-C, MicroSD slot, Headphone jack
ivenkile yokudlala: Inokwenzeka
Specials: "Iqela losapho" app evumela ukuncokola kunye nokwenza iminxeba yevidiyo kunye nabantwana
Uluhlu: Itshaja ye-5V 2A kufuneka ithengwe ngokwahlukeneyo
Amanqaku ethu 9.1
129,99 119,99 yeEUR
6. NANGENZANI.GO ‎KT1006 Abantwana beThebhulethi
Imilinganiselo yemveliso X x 24.4 20.2 3.4 cm
Bonisa: 8 intshi, 1280x800 pixels
Uhlobo loQhagamshelwano: IBluetooth, WiFi
inkqubo yokwenza Android 10
accumulator: 6000mAh lithium polymer ibhetri
Ubomi bebhetri: ‎9.25 watt iiyure
Ubunzima bento Iigram ezingama-540
Amanqaku ethu 9.0
149,99 139,99 yeEUR
7. Itheyibhile yePebble Gear Kids 7
UMarke: Isixhobo sePebble
Ulawulo lwabazali: Abazali banokubeka iliso, babeke ixesha lomdlalo, ixesha lomdlalo kunye nokufikelela kwi-app kwiakhawunti yomzali
impilo: Isihluzi sokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, imidlalo evela kwivenkile yeapp yakho ayinantengiso ngokupheleleyo
Umthamo wokugcina: I-16 GB (malunga ne-12 GB isafumaneka emva kofakelo lokuqala)
Imilinganiselo yemveliso 25x18x2cm; 780 grams (Engumkhenkce), 7.7 x 17.5 x 24.1 cm (Iimoto),
imibala: Bululo oLukhanyayo (Engumkhenkce), uMthubi weMustard (Ibali lokudlala), Umqondiso oBomvu (Iimoto), uTurquoise Blue (iMickey Mouse Bundle + iHeadphones)
Ubungakanani bokubonisa 7 Zoll
Inkqubo: I-Quad-core 1,3 GHz CPU
inkqubo yokwenza I-Android 8.1 Oreo / okanye i-Android 8.1 Go (uguqulelo lweMickey Mouse kunye neeMoto)
Ubunzima bento : 780 grams (Eqandisiweyo), 485 grams (Mickey Mouse),
Unxibelelwano: Micro USB port, MicroSD slot
ivenkile yokudlala: Akwenzeki (iYoutube kunye neYouTube Kids zinokusetyenziswa kuphela ngeSafe-Brower kunye nokumhlophe)
Specials: Ngaphezulu kwemidlalo engama-500 kunye neeapps ezinokufikelela simahla kweenyanga ezili-12 kwi-'GameStore Junior App Store'. (Emva kwaloo 39,99 euros unyaka omnye.)
Amanqaku ethu 8.9
Ukusuka kwi-89,90 - 124,99 EUR
Imilinganiselo yemveliso ‎19 x 12 x 1 cm; 350 grams
Inkqubo yenkqubo 4
Ubungakanani be-RAM I-2 GB
Ubugcisa bokuGcina I-DDR3 SDRAM
Uhlobo loNxibelelwano I-Wi-Fi
Isisombululo sekhamera yewebhu 2MP
inkqubo yokwenza Android
amabhetri ifakiwe Ewe
Ubomi bebhetri: 11.1 watt iiyure
Ubunzima bento : I-350 g
Amanqaku ethu 8.6
Ukusuka kwi-EUR 98,99
Inkqubo esebenzayo: Android 10
Ubungakanani bomboniso: 7 ngaphakathi
7 intshi HD ukubonisa
Imibala: Iza ngemibala emibini: eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nepinki
AEEZO Mahala Ulawulo lwabazali App: Qhagamshelana nabantwana kwaye ujonge imisebenzi yamva nje + frequency kunye nobude bokusebenzisa
Amanqaku ethu 8.4
Ukusuka kwi-EUR 85,83
Indlela yokuvavanya ithebhulethi yabantwana
Sasebenzisa kwaye savavanya zonke iipilisi zabantwana ezingama-23 ezahlukeneyo kuvavanyo kwithuba leentsuku ezi-5. Ukusuka kwiipilisi ezingama-20 ezinokwenzeka zabantwana, ekugqibeleni sasebenzisa i-10 kuvavanyo ixesha elide kwaye sazibeka kwisantya sazo. Ukhuseleko kwisixhobo, inkqubo yokusebenza esetyenziswayo kunye nokuphatha abantwana ibiyeyona ndlela iphambili yovavanyo lwethu.
Ujongano lomsebenzisi kwafuneka lulungiselelwe iimfuno zabantwana. Ezi ziquka uvakalelo lokuchukumisa, ukuhamba ngezakhono eziphantsi zemoto kunye nokubunjwa kweemenyu kunye nomxholo. Ezi kwakufuneka zifikeleleke lula ebantwaneni.
Iimpawu zobugcisa. Ezi ziquka ukusonjululwa komboniso, ukukhanya kunye nokubonakalisa. Kwakhona umthamo wememori, isisombululo sekhamera kunye nesantya seprosesa.
Izicwangciso zokhuseleko kunye nokulawulwa kwabagcini abasemthethweni. Ukuba nokwenzeka kokunciphisa ixesha lokusetyenziswa kwakufuneka kubekhona. Abazali kufuneka bakwazi ukulawula umxholo onokusetyenziswa ngumntwana kwaye bakwazi ukujonga izinto ezenziwa ngumntwana. Iapp yomzali ibiyinto edibanisayo.
uzinzo. Uhlobo kunye nobungakanani be-casing kwafuneka bumelane nokuwa okungenani kweemitha ezi-3. Ukongezelela, akukho zivumba ezingathandekiyo kufuneka ziphume kwizinto eziphathekayo.
Iindleko. Asibandakanyi ngokupheleleyo abavelisi abaneendleko ezifihlakeleyo okanye imigibe yokurhuma kolu mboniso.
Isiphumo ngokweenkcukacha: Ithebhulethi yeAmazon Fire 8HD
I-Fire 8 HD Tablet Kids Edition inomgangatho ophezulu, isakhelo seplastiki esizinzileyo. Abantwana abasaqalayo kunye nabantwana abasaqala isikolo abathanda ukuvavanya imida yabo kunye nomngcipheko wokonakalisa ithebhulethi babonelelwa kakuhle koku. Sikholelwa ukuba le thebhulethi iya kuba liqabane eliqinileyo iminyaka emininzi, nakubantwana abancinci, njengoko idatha yomsebenzisi esiyiphononongileyo ibonisa ukuba isakhelo kunye nekhusi zibambe kakuhle xa zixhatshazwa ngabantwana.
Ithebhulethi lukhetho olukhulu lwabantwana kuba ilula, yomelele, kwaye inobomi obude bebhetri. Ngaphezu koko, inika ngaphezu kwemidlalo nje - unokuyisebenzisa ukubukela iimuvi okanye iinkqubo zikamabonwakude, ukufunda iincwadi, ukudlala usetyenziso olufundisayo, okanye nokwenza umsebenzi wasekhaya! Kwaye ngolawulo lwabazali, unokunqanda oko bakubona kwi-intanethi ukuze bangavezwa nantoni na engafanelekanga.
✔️ Isiqinisekiso seminyaka emibini esingenaxhala: Isixhobo siya kutshintshwa ukuba siyaphuka ngeli xesha
✔️ Ulawulo lwabazali: luhlengahlengiswa ngokupheleleyo ukulungelelanisa inqanaba lokhuseleko ngokusekwe kwiminyaka yobudala kunye nezinto ezikhethwa ngumsebenzisi
✔️ Ukuxhaswa ngemali kunokwenzeka kwipesenti ze-0 kwizavenge ezintathu zenyanga malunga ne-45 euro
✔️ Isiboniso see-intshi ezisibhozo ezinesisombululo esigcweleyo seHD
✔ Eyakho ithala leencwadi leendaba ngaphandle kwentengiso ngobhaliso lweAmazonKids +
❌ Akukho venkile kaGoogle Play enokwenzeka kuba isixhobo sisebenzisa iFire OS (inkqubo yokusebenza yeAmazon) endaweni yeAndroid. (Isikhokelo sendlela yokufaka iNetflix nangona kunjalo)
❌ Umboniso ubonakala umnyama
❌ I-LTE ayinakwenzeka ekuhambeni
iipilisi zabantwana ukungenisa uthenge entsha phantse zonke iimpawu ukuba izixhobo abantu abadala nazo kwimarike. Abavelisi bazibekele usukelo lokuvumela iipilisi zikhule nazo ukuze abantwana bakwazi ukuzisebenzisa ngokuzimeleyo. Kwangaxeshanye, kukho kwakhona imisebenzi ukuba abazali vumela i Ukunciphisa ixesha lesikrini sabantwana kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi kunye nokubeka iliso. Ukuze ithebhulethi ukuya kwiminyaka ephezulu kunye zingisa esikolweni ingaba zininzi Iimodeli zetafile ezifanelekileyo kubafundi. Ngakolunye uhlangothi, iipilisi zabantwana zanamhlanje zijolise ekwenzeni oku kangangoko kunokwenzeka ulungele umntwana ukunika abantwana ithuba lokuxhamla ngokuzimeleyo kwasebancinci kwaye ngokufanelekileyo nabasebenzisi abancinci ukukhula kunye. Ngenxa yokuba ziyakwazi ukulungelelaniswa kuyo nayiphi na iminyaka, iipilisi zinokuhamba ixesha elide umsebenzi wobomi zuza. Nantso ke enye inkalo yokusingqongileyo, omele uyiqwalasele xa uthenga. Abazali abaninzi bayazibuza ukuba ingaba a Ithebhulethi yabantwana iyavakala kunjalo kwaye konke imfundo enexabiso ingayi. Singena kwiinkcukacha ezithe kratya kula manqaku angezantsi kuvavanyo.
Iipilisi zanamhlanje zineempawu ezininzi ezivumela abazali ukuba balawule abantwana ngelixa bezisebenzisa kwaye banike abantwana ithuba lokudibanisa umdlalo kunye nokuzonwabisa kunye nokufunda. Iimpawu zethebhulethi yabantwana 2021 kufuneka ibandakanye zezi:
Isibali-xesha sokunciphisa ixesha lokusetyenziswa kwabantwana (Ngakumbi ngesihloko: Lingakanani ixesha lesikrini elilungele abantwana? / Lockdown abantwana screen ixesha)
Iimpawu ezifana nekhamera, ikhamera yangaphambili kunye nekhamera yangasemva
Indawo encinci ye-SD ukwandisa ugcino
Isikhuselo esizinzileyo kumonakalo wempembelelo (Ngakumbi ngesihloko: ubundlongondlongo kwasebusaneni)
USB-C ukhetho lokutshaja
Imveliso ye-headphone, igalelo le-microphone kunye nokunyuka kwetafile
Iziphumo zovavanyo lwethebhulethi yabantwana - yiyiphi ithebhulethi eyona nto ingcono kubantwana?
Njengethebhulethi yabantwana, sicebisa ngamxhelo mnye oku Umlilo 8 HD Tablet Kids Edition. Esona sizathu siphambili: Ibandakanya ngokusebenzisa iAmazon enye iwaranti yeminyaka emibini. Ngoko isixhobo siyaphuka, ungayisebenzisa ngokukhawuleza utshintshiselwano - kwaye iminyaka emibini. Ukongeza, ineempawu yonke imisebenzi yethebhulethi epheleleyo yabantu abadala kwaye ngoko inokukhula kunye nabo. I Indawo yomsebenzisi kwaye umxholo uyaguquguquka, uyalawuleka kwaye ulungelelaniswe ne Yenzelwe iimfuno zabantwana, i yepeni unako ubuncinane kwi iminyaka yesikolo isetyenziswe. Indawo yesibini iya kwithebhulethi yabantwana yeVankyo S8. Kuye kunye 60 GB enkulu kakhulu Indawo yokugcina, Ukongeza kwimo yomzali, nayo inemowudi elula emehlweni. Kukwakho nekhamera yangaphambili nangasemva enomgangatho womfanekiso omkhulu kwaye iyafumaneka kubathandi beGoogle Playstore. Oku kwakhona icwecwe ngokupheleleyo. Ngokulungelelaniswa kweminyaka, iVankyo S8 inokusetyenziswa ukuya kutsho kwiminyaka yesikolo.
Iitafile ziyindlela entle yokugcina abantwana bakho bonwabile.
Uvavanyo lweThebhulethi yabantwana yeyona ndawo ilungileyo yokufumanisa ukuba yeyiphi ithebhulethi elungele wena kunye nosapho lwakho. Sinophononongo lwazo zonke iipilisi eziphezulu ukuze wenze isigqibo esinolwazi malunga nokuba yeyiphi ithebhulethi ekulungele wena. Uya kukwazi ukubona ukuba zeziphi iimpawu ithebhulethi nganye enayo, ixabisa malini, kwaye leliphi iqela leminyaka eyilungeleyo phambi kokuthenga.
Ingcamango yesipho esigqibeleleyo! Nika abantwana bakho into abaya kuyithanda kwaye iya kubanceda bafunde ngakumbi ngetekhnoloji kweli hlabathi ledijithali siphila kulo namhlanje. Kwaye, uninzi lweetafile zigcwele ii -apps zemfundo ezinokunceda abantwana bafunde izakhono ezitsha ngelixa bebonwabile.
Abantwana bahlala besendleleni kwaye bafuna into yokubagcina bonwabile.
Iitafile ziyindlela entle yokuba abantwana bafunde ngetekhnoloji kwindawo ekhuselekileyo engabaphazamisi kumsebenzi wabo wesikolo njengoko ii-smartphones zinokwenza. Kwaye ukuba umntwana wakho uyakuthanda ukudlala imidlalo kwithebhulethi yakhe, loo nto ilungile kuba kukho iitoni zemidlalo yokufundisa! Ngoko musa ukulinda kwakhona - fumana umntwana wakho ithebhulethi namhlanje!
Twitter Instagram phakathi
© 2022 Uphononongo lweThebhulethi yaBantwana